Ahoana ny fampiasana ny faharanitan-tsaina artifisialy amin'ny orinasanao - Victor Mochere
Ahoana ny fampiasana ny faharanitan-tsaina artifisialy amin'ny orinasanao
Fotoana famakiana: 3 mn novakiana
Lasa ampahany amin'ny fiainantsika andavanandro ny Artificial Intelligence (AI). Amin'ny tranga maro, ny olona dia mampiroborobo ny fampiasana azy ary mitatitra ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana azy. Zava-dehibe ny mitadidy fa tsy fanoloana ny faharanitan-tsain'olombelona ny AI. Ampiasaina miaraka amin'ny faharanitan-tsain'olombelona izy io mba handraisana fanapahan-kevitra haingana kokoa noho ny zavatra atao. Efa am-polony taona maro no nisy izany ary mila izany faharetana izany mba hikarohana sy hivoatra araka ny tokony ho izy. Ary koa ny fampiasana azy ao an-trano, AI dia manana hery lehibe eo amin'ny tontolon'ny fandraharahana.
1. Cyber ​​Security
2. Tetikady ara-barotra
3. Fikarakarana trano
Amin'ny ambaratonga tsotra, AI dia tsy ampiasaina tsara indrindra amin'ny fiarovana an-tserasera satria ny ankamaroan'ny fonosana fiarovana an-tserasera dia mamoaka algorithm natao hiadiana amin'ny fandrahonana mahazatra indrindra. Ny tombontsoan'ny AI dia manohitra ny fandrahonana be pitsiny kokoa izay mamono fanafihana isan-karazany tsy tapaka. Hita mialoha ny hetsika mampiahiahy ary noho izany dia karakaraina haingana sy mahomby ny fitsaboana.
Ity dia faritra lehibe amin'ny AI mba hisy fiantraikany lehibe. Ny fikarohana sy ny famakafakana ny lamin'ny mpividy, ny fijerena ny tsena kendrena ary ny fijerena ny mpifaninana dia azo atao sy ataon'ny olona fa ny AI dia manatsara izany tsy amin'ny famokarana angon-drakitra fotsiny fa amin'ny fanatanterahana paikady mandroso. Afaka manao izany ny olombelona, ​​saingy ny AI dia mampihena ny fahadisoan'ny olombelona amin'ny famakafakana angon-drakitra ary mampihena ny fotoana ilaina amin'ny famoronana paikady.
Fampiasana mahazatra ny AI amin'ny orinasa. AI dia ampiasaina hifehy ny mari-pana, ny jiro ary ny rafitra fiarovana ao anaty trano. Mitranga ho azy ireo ary manafoana ny filàna olona hipetraka sy hanara-maso ny angona sy ny tabilao. Foanana ny fahadisoan'ny olombelona, ​​ary mandeha amin'ny ambaratonga mahomby kokoa ny orinasa.
Somary hafahafa ny fampiasana eto amin'ny teny hoe olombelona. Zava-dehibe ny mahatsiaro fa ny AI dia tsy fanoloana ny faharanitan-tsain'olombelona, ​​​​fa fomba iray hanatsarana azy. Ny AI dia azo ampiasaina hamitana asa izay mitaky ora ao amin'ny departemantan'ny HR. Ny fampandehanana ny fangatahana asa dia fomba tsara hampiasana AI. Ny orinasa sasany dia mandroso bebe kokoa amin'izany ary mampiasa ny AI mba hifandraisana amin'ireo kandidà ary hanasa azy ireo hanadinadina.
Esory ny asa miverimberina sy mandreraka matetika ao anatin'ny dingana famokarana. Amin'ny fikarakarana izany miaraka amin'ny AI, ireo mpanamboatra matihanina dia afaka mampifantoka ny fotoanany sy ny fahaiza-manaony amin'ny ampahany be pitsiny kokoa amin'ny tetikasa. Noho izany, mitombo ny vokatra, ary foana ny fahadisoan'ny olombelona. Tsy vitan'ny hoe mahavita asa ara-batana fotsiny izany. Ny Artificial Intelligence dia manana tombony fanampiny amin'ny fanaraha-maso ny fangatahana vokatra. Raha tokony ho olona manao izany, ny AI dia manao izany ho azy.
Nandritra ny taona maro ny olona dia nanao tetik'asa fikarohana amin'ny ambaratonga samihafa ary nanao izany tamin'ny ambaratongam-pahombiazana. AI dia fitaovana mahery vaika amin'ity sehatra ity dia ao anatin'ny habetsahan'ny fikarohana azony atao amin'ny 100% marina. Rehefa vita, ny ekipa mpikaroka dia afaka mamintina ny zavatra hitany ary manapa-kevitra ny amin'ny fomba hojerena manaraka. Fanatsarana lehibe amin'ny fampiasana AI hanaovana fikarohana.
Tsy azo atao ny manolo ny olona amin'ny AI ao anatin'ny departemantan'ny kaonty. Na izany aza, ny zavatra ataony dia manafaka ireo matihanina hifantoka amin'ny hetsika avo lenta fa tsy ny asa andavanandro. Ny asa isan'andro dia mety ho lasa monotonous izay mahatonga ny fahadisoan'ny olona ho an'ny orinasa. Ary koa, ny habetsaky ny asa azo tanterahina miaraka amin'ny AI dia midika hoe famokarana bebe kokoa ao anatin'ny fizarana kaonty.
Ny fivoaran'ny AI dia goavana ary tsy misy antony tsy hitohizan'izany amin'ny ho avy. Misy fampianarana azo alaina ho an'ny tompon'ny orinasa sy ny mpiasa ao aminy mba hahafahan'izy ireo mijanona hatrany amin'ny vaovao farany amin'ny fivoarana vaovao eo amin'ny tontolon'ny AI. Ny orinasa dia natao hahazo tombony bebe kokoa amin'ny AI. Raha ny marina, ireo orinasa tsy mampiasa azy ireo dia atahorana ho tavela eo amin'ny sehatra misy azy sy ny sehatra misy azy.
Inona no atao hoe plagiarisme amin'ny lahatsoratra
George J. Newton dia tompon'andraikitra amin'ny fampandrosoana ny fandraharahana hajaina ao amin'ny Serivisy fanoratana lahatsoratra ary Serivisy fanoratana thesis. Efa nivady nandritra ny folo taona mahery izy, tonga lafatra ny zavakanton'ny fialan-tsiny teny an-dalana. Amin'ny fotoam-pialan-tsasatra dia mankafy manoratra lahatsoratra momba ny raharaham-barotra izy Coursework manaraka.
Ny klioban'ny baolina kitra manankarena indrindra 20 ambony manerantany 2022